သွေးအုပ်စုများ၊ သွေးအုပ်စုနှင့် ပင်ကိုယ်စရိုက် ဆက်စပ်မှု - Page 10 of 19 - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 18/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သွေးအမျိုးအစားသည် ပင်ကိုယ်စရိုက် လက္ခဏာများ နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု ဂျပန်က ယူဆပြီး သွေးအမျိုးအစား လေ့လာမှုများကို ဂျပန်မှ အစပြုလုပ်ဆောင်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဂျပန်အပြင် အခြားနိုင်ငံများမှ ထိုအယူအဆ အကြောင်း သုတေသနများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သွေးအမျိုးအစားသည် သင်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို ဖော်ပြရုံ သာမက အချို့ရောဂါများ ရနိုင်ချေကိုပါ ဖော်ပြကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုလေ့လာမှုများ စတင်ခဲ့သော ဂျပန်တွင် သင်၏ ဇီဝလက္ခဏာများသည် သင်၏ အလုပ်ကို လွဲချော်နိုင် စေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သင်သည် အလုပ်တစ်ခုတွင် အခြား အလုပ်များထက် ဘယ်လိုသင့်တော်သလဲ ဆုံးဖြတ် ပေးသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ် သမားများကို ရွေးချယ်ရန်၊ စစ်ဆေးရန် သွေးအမျိုးအစားကို အချက်အလက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ကြင်ဖက်ရှာ ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်များသည် သွေးအမျိုးအစားကို ဒိတ်များ စီစဉ်ပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။
သွေးအမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိသည်။ အေ၊ ဘီ၊ အေဘီ နှင့် အို ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင် လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်ကို ပြသနိုင်သော၊ လူတစ်ယောက်သည် အခြားတစ် ယောက်နှင့် ဘယ်လောက်လိုက်ဖက်သလဲကို ပြနိုင်သော၊ ဘယ်လို အရည်အသွေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်သလဲကို ပြနိုင်သော တိကျသော လက္ခဏာများ ရှိသည်။
အေသွေးများသည် ပြည့်စုံမှုကို လိုလားသူများ ဖြစ်ကြ သည်။ သူတို့ကို သူတို့နှင့် အခြားလူများအပေါ် တောင်းဆိုမှု အလွန်များသည်။ သူတို့သည် အပြင်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ်ပုံ ပေါ်သော်လည်း အတွင်းစိတ်မှာ တကယ် ရဲရင့်ပြီး ပြတ်သား သည်။ သူတို့သည် ရှက်ကြောက်သော်လည်း အလွန်ယုံကြည် စိတ်ချရသည်။ ခံစားရလွယ်ပြီး အနုပညာဆန်ကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အေသွေး အများစုသည် မပေါက်ကွဲ ခင်အထိ သူတို့၏ ခံစားချက်များကို သိမ်းဆည်းထား ကြသည်။ သူတို့၏ စွမ်းရည်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်း လုပ်နိုင်သော်လည်း သူတို့သည် စိတ်ဖိစီးတတ်ကြသည်။ ၎င်းသည် သူတို့၏ စိတ်နှင့် ခန္ဓါအတွက် အကျိုးမရှိ ဖြစ်စေ သည်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသော အေသွေးပိုင်ရှင်များမှာ – Geogre H W. Bush, အဒေါ့ ဟစ်တလာ၊ ဘရစ်တနီ စပီးယား၊ Richard Nixton တို့ဖြစ်သည်။
ဘီ သွေးများသည် အလွန်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးကြသည်။ သူတို့သည် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက အလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ် နိုင်ပြီး အလုပ်များအားလုံး မပြီးမချင်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သည်။ သူတို့ဖာသာ သူတို့ ရပ်တည်နိုင်ကြပြီး ဘဝတွင် ရှင်သန်ရန် နည်းလမ်းများ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များသည် အလွန်စာနာ တတ်သည်။ အခြားသူများကို နားလည်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရာတွင် အများစုမှာ တုံ့ဆိုင်းကြသည်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသော ဘီသွေးပိုင်ရှင်များမှာ လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယို၊ Paul McCartney, Luciano Pavarotti, Mia Farrow, Vince Young တို့ဖြစ်သည်။
အေ နှင့် ဘီ အရောဖြစ်သောကြောင့် ဤသွေးပိုင်ရှင်များ သည် ပင်ကိုယ်စရိုက် ခွဲထွက်ခြင်း ရှိနိုင်သည်။ သူတို့သည် ဖော်ရွေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ရှက်ကြောက်နိုင်သည်။ ရဲရင့် နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကြောက်လန့်နိုင်သည်။ သူတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အခြားသူများကို ကူညီခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း ရှိသည်။
အေဘီ သွေးအမျိုးအစားသည် လူဦးရေ အားလုံး၏ ၂-၅ ရာနှုန်းသာ ရှိသည်။ သူတို့သည် အတွင်းမှ ဆွဲဆောင်မှု ရှိသူ များဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တာဝန်ယူနိုင်သော်လည်း တာဝန် များ များလာပါက အေသွေးများကဲ့သို့ပင် စိတ်ဖိစီးလာကြ သည်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသော အေဘီသွေး ပိုင်ရှင်များမှာ- ဂျွန်အက် ကနေဒီ၊ သောမတ် အက်ဒီဆင်၊ မာရီလင် မွန်ရိုး၊ Miyavi, ဂျက်ကီချမ်း၊ Mick Jagger, Bob Sapp တို့ ဖြစ်သည်။
အိုသွေးသည် ဆေးလောကနှင့် လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် ရတနာတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ အိုသွေး ပိုင်ရှင်များသည် အလွန် ဖော်ရွေကြသည်။ အာရုံစိုက်မှု လိုချင်သော ပွင့်လင်းသော ပျော်တတ်သော သူများဖြစ်ကြသည်။ လူများနှင့် ဆက်ဆံရ သည်ကို နှစ်သက်ကြပြီး အပေါင်းအသင်းကောင်းသော သူများ ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု မြင့်သူများ ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် ထိုးထွင်းသိမြင်သော ညဏ်ကောင်းပြီး မိမိ ကိုယ်ကို အားကိုးသည်။ အာရုံစိုက်မှုလည်း ကောင်းသော ကြောင့် ခေါင်းဆောင်နေရာများ ရသည်။ ထို့အပြင် အိုသွေး ပိုင်ရှင်များသည် အခြားသွေးအမျိုးအစားများထက် စိတ်ဖိစီးမှု ကို ပိုမိုခံနိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်လည်း ပိုမိုသန်မာသည်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသော အိုသွေးပိုင်ရှင်များမှာ- Queen Elizabeth II, အဲဗစ် ပရစ်စလေ၊ Ronald Reagan, Al Capone, Gerald Ford, John Gotti, John Lennon, Paul Newman တို့ဖြစ်သည်။
Blood Type Reveals Personality. http://www.recipeapart.com/blood-type-reveals-personality/acessed April, 2017
The Links between Your Blood Type and Your Personality, Diet and More Explained. http://bodyecology.com/articles/link_blood_type_personality_diet.phpacessed April, 2017